घरकाले व्यापार गर भन्थे, उनले खोलिन् फुच्चे पुस्तकालय :: Setopati
घरकाले व्यापार गर भन्थे, उनले खोलिन् फुच्चे पुस्तकालय
सबिना श्रेष्ठ ललितपुर, असार १७
पाटन ढोकाबाट दरबार स्क्वायर जाने गल्लीमा अब पुस्तकालय थपिएको छ।
पहिलो घुम्तीबाट चार घर पर बाँयापट्टि तपाईं 'मिनी लाइब्रेरी' अर्थात् फुच्चे पुस्तकालय लेखिएको बोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ। त्यही नै हो करिब छ महिनाअघि खुलेको पुस्तकालय 'बुक्स इन'।
सानो ठाउँ अनि थोरै किताबबाट पनि पढ्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण हो यो पुस्तकालय। यसकी संस्थापक हुन् ३१ वर्षीया नसला महर्जन।
करिब दस वर्षदेखि शिक्षण पेसामा आबद्ध छिन् उनी। पढाउनेक्रममा नै पुस्तकालयको आइडिया फुरेको बताउने उनी भन्छिन्, 'मैले विभिन्न स्कुलमा पढाएँ। जेम्स स्कुल पुगेपछि भने भव्य पुस्तकालय देखेँ। पुस्तकालयले विद्यार्थीमा पारेको प्रभावले मलाई निकै प्रभावित गर्‍यो। आफ्नो समुदायमा पनि पुस्तकालय खोल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यहीँबाट लागेको हो।'
दस वर्षको अन्तरालमा उनले पढाएका यसअघिका कतिपय स्कुलमा पुस्तकालय थिएन। भएकामा पनि राम्रा किताब हुन्थेनन्। कति भने शिक्षक वा प्रधानाध्यापकको कोठामा मात्र सीमित थिए। त्यहाँ जे-जति किताब भेटिन्थे, नसला पढ्थिन्। जेम्समा पढाउन थालेपछि उनले किताबको भव्य संसार देखिन्।
दुई वर्षअघि स्कुलले 'इन्सेन्टिभ रिडिङ' भनेर विद्यार्थीलाई किताब पढ्नै पर्ने वातावरण बनाएको थियो। त्यसबाट विद्यार्थीको ज्ञान त बढ्यो नै, उनीहरूमा किताब पढ्ने बानी पनि बस्यो।
त्यो देखेपछि नसलाले सोचिन्, 'यहाँ पो आर्थिक अवस्था राम्रो भएका विद्यार्थी पढ्छन् र कोर्सबाहेकका किताब पनि पढ्न पाउँछन्। कतिले त मन भएर पनि त्यस्ता किताब पढ्न पाएका छैनन्। त्यसमाथि किताब महँगो पर्छ। उनीहरूले धेरै किताब कसरी किनेर पढ्लान्?'
यही सोचले बारम्बार सताउन थालेपछि उनले पुस्तकालय खोल्ने सोच बनाएकी थिइन्।
सुरूआतमा पुस्तकालय खोल्ने भन्दा धेरैले उनलाई हतोत्साहित मात्र गरे। आफ्नै परिवारले समेत भनेका थिए, 'यसमा नाफा हुँदैन। बरू कुनै व्यवसाय गर।'
उनलाई व्यवसायभन्दा पनि समाजका लागि काम गर्नु थियो। त्यसैले जनवरी १० मा पुस्तकालयका उद्घाटन गरेर उनले आफ्नो हठ पूरा गरिछाडिन्।
नसलाको घर पाटनको अग्निशालामा हो। जुन ठाउँमा यो पुस्तकालय छ, यो उनको माइतीघर हो।
पुस्तकालय सुरूआती चरणमा भएकाले उनलाई के–कस्तो हुन्छ थाहा थिएन। त्यसमाथि उनी त्यस्तो ठाउँको खोजीमा थिइन् जहाँ धेरै खर्च पनि गर्न नपरोस्। त्यही भएर अग्निशालाबाट नजिकै पर्ने माइतीको खाली कोठालाई उनले पुस्तकालय बनाइन्।
'यहाँ पुस्तकालय खोल्दा आमाबुवा र बहिनी–भाइसँग नजिक बनाएको छ नै, पुस्तकालयलाई पनि सहयोग पुगेको छ,' उनले भनिन्, 'म नभएको समयमा पनि उहाँहरूले किताब दिनुहुन्छ। त्यही भएर पुस्तकालय खुल्ने समयबाहेक ग्राहक आए पनि रित्तो फर्किनु पर्दैन।'
पहिलो लकडाउन अगाडि नै नसलाको पुस्तकालय खोल्ने सोच थियो। तर त्यहीबेला अंग्रेजीमा स्नातकोत्तर सुरू गरेकाले समय घर्किँदै गयो। उनले किताबको सूची बनाउन र संकलन गर्न भने थालिसकेकी थिइन्। संकलन गर्दा उनले गुगल, गुडरिड्स, रिभ्यु लगायतको सहायता पनि लिइन्। त्यही आधारमा सुरूमा उनले करिब पाँच सय किताब किनिन्।
बीचबीचमा नयाँ किताब किन्ने र यहाँ आउने ग्राहकले पनि केही किताब दानमा दिएकाले अहिले यहाँ पाँच सयभन्दा बढी किताब भइसके।
'किताब किन्दा यही ठाउँमा किन्ने भन्ने हुँदैन, म जहाँ पनि किन्छु,' उनले भनिन्, 'पुस्तकालयका लागि भनेपछि अरूलाई भन्दा बढी छुट पाइन्छ। पछिल्लो समय भने बुक्स मण्डलाबाट धेरै किताब किनिरहेकी छु। त्यहाँ अन्य ठाउँभन्दा राम्रो छुट दिइरहनुभएको छ।'
किताबसँगै फर्निचर पनि अर्डर दिएर नयाँ बनाउँदा करिब पाँच लाख खर्च भइसकेको उनी बताउँछिन्।
नसलाले पुस्तकालय र त्यहाँका किताब प्रचार गर्ने माध्यम फेसबुक र इन्स्टाग्राम हो। त्यसलाई उनको आफन्ती भाइबहिनीले पनि 'अप–टु–डेट' राख्न मद्दत गर्छन्।
कहिलेकाहीँ ग्राहकले खोज्ने किताब पनि उनी किनेर ल्याउँछिन्। त्यही भएर यहाँ कम भए पनि राम्रा र नाम चलेका किताब भेट्न सकिन्छ।
किताब लैजान छ महिने वा एक वर्षे सदस्य बन्नुपर्छ। छ महिने सदस्य बन्न पाँच सय र एक वर्षको हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्छ। त्यसपछि सदस्यले जति पनि किताब लगेर पढ्दा भयो।
'एक पटक लगेको किताब पढिसक्ने अवधि एक महिना हो। पढिनसके नवीकरण गरेर समय थप्न सक्नुहुन्छ। समय थप्न फोन वा म्यासेज गर्दा पनि हुन्छ,' उनले भनिन्, 'समय सीमा नाघ्यो भने चाहिँ पचास रूपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्छ। लकडाउनमा भने जरिवाना लागू भएन।'
पुस्तकालय खुल्ने समय सोमबारदेखि शुक्रबार चार बजेदेखि सात बजेसम्म हो। तीन बजेपछि नसलाको स्कुल छुट्टी हुन्छ। त्यसपछिको समय आफूलाई पनि पायक पर्ने भएकाले यस्तो राखेको उनी बताउँछिन्।
सदस्यको घरैमा किताब पुर्‍याउने सुविधा पनि बुक्स इनमा छ। त्यसका लागि डेलिभरी शुल्क भने तिर्नुपर्छ। पचास रूपैयाँबाट सुरू हुने यो शुल्क सदस्यको घरको दुरीअनुसार तय हुन्छ।
लकडाउनले किताब पढ्ने र पुस्तकालयको दुरी बढाउन खोजेको थियो। बन्दै गरेको यो पुस्तकालय बन्द गर्नुपर्‍यो। तर किताब लिने सदस्यहरूले सोध्न छाडेनन्, 'बुक्स इन खुलेको छ?'
त्यसरी प्रश्न सोध्नेलाई 'खुलेको छैन' भनिनन् उनले। नसलाको भाइहरूले लकडाउनकै समयमा ढोका खोलेर किताब दिए। कहिलेकाहीँ उनी आफैं पुग्थिन्।
तर सामाजिक सञ्जालमा किताबका पोस्ट भने कम गरिन्। कोरोनाको समयमा धेरै पोस्ट देखेर ग्राहक धेरै आउलान् भन्ने डर थियो। अहिले निषेधाज्ञा खुकुलो भएकाले 'कल बेसिस' मा बुक्स इन खुल्ने जानकारी सामाजिक सञ्जालबाटै दिइएको छ।
त्यही जानकारी पाएर एक सदस्य हामी कुराकानी गरिरहेको बेलै बुक्स इन आएकी थिइन्। आफूले पहिले लिएको पाउलो कोहेलोको किताब फिर्ता दिएपछि उनले सिड्नी सेलडनको किताब लिइन्।
नख्खुदेखि करिब आधा घन्टा हिँडेर आएको बताउने सृष्टि पुलामी यहाँको सदस्य बनेको चार महिना भएछ। चार महिनामा चारवटा किताब लगिसकेकी उनले यो पुस्तकालयबारे बताउँदै भनिन्, 'साथीबाट यो ठाउँबारे थाहा पाएकी थिएँ। पहिला किताब किनेरै पढ्नुपर्थ्यो, यसरी साटेर पढ्ने ठाउँ थिएन। यहाँको सदस्य मूल्य पनि मलाई ठिकै लागेपछि यहाँ आएकी हुँ।'
सृष्टि अहिले स्नातक दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत छिन्। यहाँका अन्य सदस्यहरू पनि स्कुल र कलेज पढिरहेका विद्यार्थी नै धेरै छन्।
पहिला के–कस्तो होला भन्ने अलमलबीच खोलिएको पुस्तकालयले अहिले राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेकाले नसला उत्साहित छन्। घरै किताब लगेर पढ्ने सुविधा छ नै, यहाँ आउँदा आफूलाई समेत आनन्द आउने उनको अनुभव छ। त्यसमाथि नर्सरीमा पढिरहेका उनका छोराले पनि उनलाई भन्छन् रे, 'त्यहीँ गएर पढ्ने।'
बालबालिकाहरू किताबमाझ हुर्किँदा उनीहरूमा पढ्ने बानी विकास हुन मद्दत पुग्छ। त्यो त नसला आफूले पढाउने स्कुलका विद्यार्थीमा आएको परिवर्तनबाटै थाहा पाइसकिन्।
त्यही भएर उनी भन्छिन्, 'पढ्ने र नपढ्ने मान्छेको सोचाइ, सीप, सबैमा फरक हुन्छ। पढाइले फरक पार्ने भएकैले मैले यो पुस्तकालय खोलेकी हुँ।'
सानो कोठामा खोलिएको सानो पुस्तकालय भएकाले यहाँ पढ्ने ठाउँ भने छैन। सडक छेउमै भएकाले गाडी र मान्छेको आवाजले पनि असर गर्छ। भविष्यमा राम्रो हुँदै गए ठूलो ठाउँ बनाउने उनको योजना छ।
'अहिले त परीक्षणकालमै छु। तर सोचेभन्दा राम्रो भइरहेको छ। लकडाउनपछि सायद अझ राम्रो होला,' नसला आशावादी छिन्।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार १७, २०७८, १६:०६:००